महिलाको लागि हस्तमैथुन लाभदायक कि हानीकारक ? Kasthamandap Daily
एजेन्सी। महिलाको लागि हस्तमैथुन लाभदायक हुन्छ कि हानीकारक ? यस विषयमा कमै बहस हुने गरेको छ । एक अनुसन्धानअनुसार १८ वर्षभन्दा माथिका महिलाहरुले कम्तीमा एक पटक हस्तमैथुन गरेको पाइएको थियो ।
इंडियाना युनिभर्सिटीको सर्वेक्षण अनुसार २५ देखि २९ वर्षको उमेरको बीचका ७.९ प्रतिशत महिलाहरु हप्तामा २ देखि ३ पटक हस्तमैथुन गर्छन् । अर्कोतर्फ २३.४ प्रतिशत पुरुष हप्तामा ३ देखि ४ पटक हस्तमैथुन गर्छन् । हस्तमैथुन सामान्य, आनन्ददायक र स्वस्थ अनुभव हो । चरमउत्कर्षबाट एन्डरफिन्स डोपामाइन र अक्सिटोरिन निस्कन्छ जसले मानिसको मुड राम्रो बनाउन सहयोग गर्छ । यसबाट मानिस आत्मविश्वासले भरिएको देखिन्छन् । यसबाट शरीरप्रति सहज महसुस हुन्छ ।
यौन सम्बन्धको इच्छा भएका बेला पार्टनर उपलब्ध नहुनु वा अन्य कुनै कारणल यौन सम्बन्धको वातावरण नभएमा हस्तमैथुन सही विकल्प हो । यसबाट तनाव कम हुन्छ । चरमउत्कर्षबाट शारीरिक र भावनात्मक तनावबाट मुक्ति मिल्छ । यसबाट राम्रो निद्रा पाउन सहयोग मिल्छ । डाक्टरका अनुसार किताब पढेर जति राम्रो निद्रा लाग्छ हस्तमैथुनबाट पनि उत्तिकै राम्रो निद्रा पाउन सकिन्छ । यसबाट मानिस शान्त र तनावरहित हुन्छ ।
केही महिलाहरुलाई हस्तमैथुन गर्दा महिनावारीका बेला हुने पीडा कम हुने गरेको समेत पाइएको छ । हस्तमैथुनबाट शरीरमा रगतको प्रवाह बढ्छ जसले शरीरका विभिन्न तन्तु तथा अंगहरुको कामको प्रभावकारिता पनि बढ्छ । हस्तमैथुन गर्दा कुनै नकारात्मक असर पर्दैन । यसले कुनै शारीरिक हानी गर्दैन । न तपाइँ बिरामी पर्नुहुन्छ न गर्भवती हुने डर रहन्छ ।